စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာ ပညာရှင်တွေ စုပေါင်းပြီး ထုတ်ထားတဲ့ ငတက်ပြားဆိုတဲ့
နောက်ခံ တီးလုံးတွေကိုလည်း ဆိုင်းသံ ဗုံသံတွေနဲ့ ထည့်ထားပေးပါတယ်... ဆော့ချင်ရင်တော့ အောက်က Link မှာ ဆွဲလိုက်ပါ..
Skirt လှန်တဲ့ ဂိမ်း (Android)
ဒါလေးကတော့ စကဒ် လှန်တဲ့ Game လေးဖြစ်ပါတယ် ၊
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးကို ရွေးချယ်ပြီး စကဒ်အမြန်လှန်ရတာပါ ၊
မြန်မြန်လှန်လေ အမှတ်များများရလေးပေါ့ :) ယောက်ကျားလေးများ အချင်းချင်းဘယ်သူအမှတ်များလဲ ပြိုင်နိုင်တာပေါ့ ဟိဟိ
ဂိမ်း ၆၀,၀၀၀ ကျော် Download ရယူနိုင်သော website
ဂိမ်း ၆၀,၀၀၀ ကျော် Download ရယူနိုင်သော website တစ်ခုပါ နောက်ပီးတော့ မြန်မာ ပြည်တွင်း ဆိုဒ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်
Address ကတော့ http://game.hin4ooe.com/game/
ကျွန်တော် ဒီ Bus Driver ဆိုတဲ့ Simulation Game လေးကို အရင်တုန်းက အင်တာနက်မှာ ဒေါင်းလုပ် ယူပြီး ကစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကစားလို့အရှိန်ရလာတဲ့အချိန်ကျတော့..ဆက်ကစားလို့မရတော့ဘူး။ Trail Version ဆိုတော့ တစ်နာရီပဲ ကစားလို့ ရတာပေါ့။ အခုတော့ အကန့်အသတ်မဲ့ကစားလို့ရပါပြီ။ ကိုယ်တိုင်မောင်းနေရသလို.ခံစားနိုင်မယ့် ဂိမ်းလေးမို့..တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ဂိမ်းရဲ့ Screen Shot လေးတွေကို ကြည့်တာနဲ့ ကစားချင်စိတ် ပေါက်လာလိမ့်မယ်နော်။
ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုပ်ယူလိုက် ပါ။
အချိန်မရလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်.. အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ယာဉ်မောင်းသင်တန်းမတက်နိုင် သူများ လေ့ကျင့် မောင်းနှင် နိုင်ဖို့ ဒီ ဂိမ်းလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဂျာမဏီ၊ ပြင်သစ်၊ နယ်သာလန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတွေရဲ့ Traffic Rules တွေနဲ့အညီ သင်ကြားပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီသင်တန်းမှာ မော်တော်ယာဉ်သာမဟုတ်ဘဲ မော်တော် ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်သည့်သင်ခန်းစာများကိုပါ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ပါဝင်စား သူများ ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုပ်ယူပါခင်ဗျာ...
ဂိမ်းကစားရခြင်းကို လွန်စွာဝါသနာကြီးသော်လည်း.. ဂိမ်း software များကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် တစ်ပါးသူများ ဖန်တီး၊ ဖော်ပြထားသည့်နေရာမှ အလွယ်တကူ (ကူးယူ)ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။ တိုက်ခိုက်တာလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားသော ဘော်ဘော်တို့ အတွက် ဂိမ်းအသစ်လေးတစ်ခုတင်ပေးတယ်။
The plot of Resident
Evil5revolves around Chris Redfield and Sheva Alomar's investigation of a
terrorist threat in Kijuju,afictional region in Africa. Chris soon finds he
has to confront his past in the shape of old enemy Albert Wesker.Download From gulammujadad.com
site & and gulammujadad.blogspot.com site.
The game was announced in 2005, the same year as its predecessor Resident Evil
4 was released, with several staff members from that game and the original
Resident Evil being involved. Employed in the game for the first time was the
use of motion capture for the cutscenes, making the characters' movements more
realistic. Its gameplay was kept similar to the previous installment, though
the game's producer Jun Takeuchi said that some thematics from the original
game were used.
Resident Evil5was released on all its platforms in 2009, eventually
outselling its predecessor and becoming the best-selling single game of the
System= Core 2
Instructions ဆော့ဝဲထည့်ရင်ဒီ password လေးတော့ထည့်ပေးပါဗျ..
ရှောင်လင်ကွန်ဖူး ဂိမ်း Android 16MB
Download>>>lastbox (or)tusfiles (or)zippyshare
of Juarez Gunslinger isafull action game from the publisher Ubisoft. This isafull adventurous game with its memorable events beyond untold legends magnificent scenes of the old west picks. So, fell free to download Call of Juarez Gunslinger Full PC Game using ad's free direct links. စစ်တိုက်ရသာကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် ကော့ဘွိုင်မင်းသား စစ်တိုက်တဲ့
ဂိမ်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား . .
အောက်မှာ ပုံလေးတွေ လေ့လားပြီးဒေါ်င်းနိုင်ပါတယ် . .
Call of Juarez Gunslinger Game Full version free, Free download Call of
Juarez Gunslinger Full PC Game, Call of Juarez Gunslinger Full version free download, Download PC Game Call of Juarez Gunslinger Full version
System Requirements OS: Windows XP, Vista,7and 8. RAM: Free2GB. Hard Drive: Minimum5GB free space. Graphics: 512 MB ​​DirectX ® 9.0c-compliant Download Link Download Part 1
Download Part3Password : ir-dl.com
အဆင်ပြေပါစေ . .
Call Of Duty Game ဆော့ချင်သူများအတွက် Call of Duty: Modern Warfare3တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Connection ကောင်းသူများအနေဖြင့် Download ယူနိုင်ပါပြီ။ Minimum System Requirements
OS: Windows XP/Vista/7 Processor: Intel Pentium4@ 3.0 GHz / AMD Athlon 64 3200+ Memory: 1 Gb Hard Drive: 13 Gb free Video Memory: 256 Mb Video Card: nVidia GeForce 6600GT / ATI Radeon 1600XT Sound Card: DirectX Compatible DirectX: 9.0c Keyboard Mouse DVD Rom Drive <<< Download Here >>> အသင့်တွေ့သောLinkအားတင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်..။ခွဲတင်ထားသည်များတွေ့သော်လည်း..အချို့အပိုင်းများမှာ Error တက်နေတတ်ပါသည်..တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဒေါင်းတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာ။
Turbobit Download Link သို့ရောက်လျှင် ခဏရပ်ထားပါ။ ပြီလျှင် http://getripz.pl/ ကို Firefox မှာထည့်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါ..ပြီးတာနဲ့ Turbobit ရဲ့ Link ကို စောနကဖွင့်ထားလိုပေါ်လာတဲ့ အကွက်ထဲမှာ ထည့်ပြီး Generate ဆိုတာနှိပ်ပေးပါ။ Download Link ကိုရရှိပြီး Download ရယူနိုင်ပါပြီ။. Comment ရေးသားပေးခဲ့သော ကိုမျိုးအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ခင်ဗျာ။
လာပြန်ပီ. Zombie Shooter ဂိမ်းလေးနော် Action
Game 3D ပဲ သူ ကတော့ Zombie တွေကို လိုက် သတ် ရတဲ့ ဂိမ်း ပဲ ဓားတွေ ပါမယ်. သေနပ်တွေ ပါမယ်.. ကိုကြိုက်တဲ့ လက်နက်နဲ့ ဆော့လို့ ရတယ်. Item တွေလဲ
၀ယ်လို့ ရပါတယ်.. ကဲကဲ ဆော့ကြည့်လိုက် ပါအုံးး ဟဲ ဟဲ ညမှ အိပ်မက်ထဲ ထည့်မက်နေမယ်နော်.. Zombie တွေကို... အောက်မှာဒေါင်းလိုက် ပါ...
Download For Android 2.2 and higher [25.4 MB][apk] *********************************************************************************
ကဲကဲ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ဆော့ရတာာ ကြိုက်တဲ့ ကိုကို မမ တွေတွက်Sefir ဆိုတဲ့AndroidGame လေးနော်.
သူ ကတော့ ဓားနဲ့ခုတ်တဲ့ ဂိမ်းလေးနော်. ဟီး ဆော့ကြည့်လိုက် အုံးဗျ. အရမ်းမိုက်တယ်.. လူတွေနဲ့ Monster လို အကောင်ကြီးတွေနဲ့ ချ တဲ့ ဂိမ်း ပဲ ..ကဲကဲပြောနေတာာ ကြာတယ်. အောက်မှာဒေါင်း ပီးတော့ ဆော့ကြည့်လိုက် အဆင်ပြေ ရင် share ပေးလိုက် အုံးနော်. Download apk [15.1 MB][apk]
Download cache [167.9 MB][zip] *****************************************************************************************
Android Game 3D snow jinks ဆိုတဲ့ ဂိမ်းလေး ပါ ဆော့ကြည့် ပါအုံး အသစ်လေး ပဲနော်.. iphone,Ipod, Ipad တွေ တွက်... ပါ
ဆော့ကြည့်လိုက်ပါ အုံး.. ဒီဂိမ်းလေး က .. shooter ဂိမ်းလို မျိုး ပဲနော်. ဟဲသူ ကတော့ သေနပ်နဲ့ ပြစ်ရတာ မဟုတ်ဘူး နော်။ နှင်းတွေနဲ့ ပြစ် ရတာ ကဲကဲပြောနေတာာကြာတယ်.. အောက်မှာဒေါင်းကြည့်လိုက် ပါအုံးနော် ။ ။Android 2.3 အထက်မှာဆော့လို့ အဆင်ပြေ မယ်. 17 MB လောက်ပဲ ရှိ ပါတယ်..Game cache ကတော့ 104.3 MB ရှိ ပါတယ်. game cache မပါလဲ ဆော့လို့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်.. ဗျာ.
Download Game cache *********************************************************************************
Silent Age ဆိုတဲ့ ဂိမ်းလေး အသစ်လေး ပဲနော်. ဆော့ကြည့် အုံး အဆင်ပြေ မပြေ ရင်ပြော ပါကျွန်တော် အရင်နေ့တွေ ကဆိုမီး ကလဲ ပြတ် နေတာာ နဲ့ မတင်ဖြစ်တာာ ပါ
PC ဂိမ်းလေးတွေ လဲ တင်ပေး ပါ့မယ်.. အားပေးကြအုံးနော် ဟီး အောက်မှာဒေါင်းလိုက်တော့
Dota2Offline ပါဆော့လို့ ရပါပီ ဆော့ကြည့်လိုက်ပါ အုံး ဗျ.. ဒေါင်း ရမည့် size ကတော့ 2GB ကျော် ကျော်ရှိတယ်.. ဗျာ...
OS _ Window7& XP
ကဲ ကဲ ဂိမ်း အလန်းလေးနော်. GTA လို ပုံစံမျိုး ပဲ သူ ကလဲ Fight တဲ့ ပွဲတွေ ပါတယ်.. ပြိုင် ပွဲတွေရှိမယ်.. အလုပ်တွေ ရှိမယ်... Android Phone Game 3D shooter ဂိမ်း ပဲ ကြမ်းကြမ်း တမ်းတမ်း ပဲနော်. ဆော့ကြည့်လိုက် အုံး အကြိုက်တွေ့သွားမယ်.. ဟဲဟဲ GanGstar Vegas ဆိုတဲ့ ဂိမ်းလေး အောက်မှာ ဒေါင်း
လိုက် Game cache ကို အရင် Install လုပ်လိုက်ပါ။ ပီး ပီ ဆိုမှ Game Install ကို တင်လိုက် တော့ အို ကေ အဆင်ပြေ ပီ ဆော့လိုက် တော့ ဗျာ. တကယ်လို့
Game cache ကGB လောက်ရှိတယ်.. ဆိုဒ် က Game cache ကို မဒေါင်းလဲ အဆင်ပြေမယ်.ထင် ပါတယ်. စမ်း ကြည့် ပေါ့ဗျာ. အဆင်ပြေ ပါစေနော်.. Game Download
ဒီဂိမ်းလေး တင် ပေးမလို့ ပါ.. မီး ကပြတ် လိုင်း ကကျ နဲ့ မတင်ဖြစ်တာာ Blood Brother.. ဆိုတဲ့ ဓားနဲ့ ခုတ်တဲ့ ဂိမ်းလေး ပဲ 3D Android Game လေးးနော်.. ဆော့ကြည့် ကြ ပါအုံးးအောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ..နော်
supranee boontoSeptember 27, 2013 at 9:54 PMလင့်သေနေပြီ.....ပြန်တင်ပေးပါလားခင်ဗျ........ReplyDeleteAdd commentLoad more...
ပထမအချည်နဲ့အားလုံးလဲကုန်ပြီ။တို့မမ ကတော့ အေးဆေးပဲ...ဟဲ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းတွေ့ရသော ချင်းတောင်တန်းနေ နာဂလူမျိုး တိုင်းရင်းသူတစု
ချင်းတောင်တန်းနေ နာဂလူမျိုး တိုင်းရင်းသူတစု။ ဆက်လက်ဖတ်လိုက်ပါအုန်းခင်ဗျာဗဟုသုတရနိုင်ပါတယ် David Bacon English Myanmar Typing Tutor5မျက်နှာလှလှလေးမှာ တင်းတိပ် မဖြစ်ရလေအောင်
တင်းတိပ်ဖြစ်ရသော အကြောင်းအရင်း တင်းတိပ်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း တိတိ ကျကျကို မသိသေးပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်သူတွေ က အကြောင်းအချက်များစွြာေ...